မောင်ချစ်: HIV ပိုးအတွက် ငှက်ပျောသီးက ဆေးစွမ်းကောင်း ဖြစ်လာနိုင်
HIV ပိုးအတွက် ငှက်ပျောသီးက ဆေးစွမ်းကောင်း ဖြစ်လာနိုင်
ငှက်ပျောသီး အတွင်း ပါဝင်သည့် ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်း တစ်ခုသည် ခုခံအား ကျဆင်းမှု AIDS ရောဂါကို ဖြစ်စေသည့် HIV ပိုးအား ချေမှုန်း နိုင်သည့် ဆေးစွမ်း ကောင်း တစ်မျိုး ဖြစ်လာ နိုင်ကြောင်း ပညာရှင် များက ပြောကြား လိုက်ကြသည်။ သဘာဝ အလျောက် ပါဝင်နေသည့် အဆိုပါ ဓာတ်ပစ္စည်း သည် လိင်မှ တဆင့် ကူးစက်သော HIV ပိုးအား ကာကွယ် ပေးနိုင်မည်ဟု အမေရိကန် သိပ္ပံပညာရှင် များက မျှော်လင့်လျက် ရှိသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်း စမ်းသပ် မှုများ အရ Lectinဓာတ် တစ်မျိုး ဖြစ်သော BanLec အမည်ရှိ ဓာတ်ပစ္စည်း သည် HIV ကို ဟန့်တား ရာတွင် အကျိုး ထူးများ ရရှိ နိုင်ကြောင်း မစ်ချီဂန် တက္ကသိုလ်ရှိ သုတေသီ များက ပြောကြား ခဲ့သည်။ Lectin သည် သကြားဓာတ် ပေါင်းစပ် ထားသော ပရိုတင်း တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး BanLec သည် သကြားဓာတ် ကြွယ်ဝသည့် HIV-1 ဗိုင်းရပ်စ်ကို ပူးပေါင်း ချေဖျက် ခြင်းဖြင့် ရောဂါပိုး ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ၀င်ရောက်ပျံ့နှံ့မှုကို ဟန့်တားနိုင်ဖွယ် ရှိနေသည်ဟု ပညာရှင်များက ယုံကြည်နေကြသည်။
BanLecကို ယခုအခါ HIVတားဆီးမှု နည်းလမ်းနှစ်မျိုးအတွက် စမ်းသပ်အဆင့်ဖြင့် အသုံးပြုနေကြောင်းလည်း သိရသည်။ မတ်လ(၁၉)ရက်နေ့ထုတ် Biological Chemistryဆေးပညာ ဂျာနယ်တွင် ယခုတွေ့ရှိမှုအကြောင်း အသေးစိတ် ဖော်ပြထားပြီး အမျိုးသမီးသုံး ကွန်ဒုံးကဲ့သို့ လိင်မှုကိစ္စမှ ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းကို တားဆီးပေးသည့် ပစ္စည်းများတွင် ပါဝင်ပစ္စည်း တစ်မျိုးအဖြစ် အသုံးချသွားဖွယ် ရှိနေသည်။ “အရင်တုန်းက HIVကာကွယ်ဆေး တချို့ကို ဗိုင်းရပ်စ်က ခံနိုင်ရည်ရှိတာမျိုး ပြဿနာတွေ ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။
ခုတော့ ဓာတ်သဘာဝ တူတဲ့ သကြားဓာတ် ပရိုတိန်းခြင်း ရောပြီး ချေဖျက်တဲ့ နည်းလမ်းက အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်”ဟု မစ်ချီဂန် တက္ကသိုလ်မှ ဒေါက်တာမိုက်ကယ်ဆွမ်ဆန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ “HIV-1 ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ အလွယ်တကူ ပေါင်းစပ်နိုင်တဲ့ Lectinဓာတ်က ရောဂါပိုး သွေးဥဆဲလ်တွေထဲ မရောက်သွားအောင် ၀န်းရံပိတ်ဆို့ထားပြီး ဖျက်ဆီးလိုက်နိုင်မယ့် အခြေအနေ ရှိနေပါတယ်။ ဒီလမ်းစကို ခြေရာခံပြီး ကျွန်တော်တို့ စမ်းသပ်မှုတွေ ဆက်လုပ်သွားရမှာပါ”ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
ရေးသူ မောင်ချစ် အချိုန် 02:50
အမျိုးအစား ဗဟုသုတ, ဟာသ
khaing thi ha 24 April 2012 at 20:14
့HIV ရောဂကို ပျောက် စေတဲ့ နည်း ရှိပါတယ်. ပျောက်တဲ့ လူလဲ ရှိပါတယ်. သက်သေ ကို နောက် မှ ရေး မယ်. ၀ိပဿနာ စက်ဝိုင်းကို နားလည်အောင် လည့်လာပါ။ စိတ် နဲ့ ရုပ် သဘာဝကို နားလည် လာပြီး.. မိမိရဲ့ စိတ်ဝေဒနာ တွေ ပျောက်ကင်း သက်သာ လာပါလိမ့်မယ်.နောက်ပြီး သေခြင်းတရားကို ရင်ဆိုင်ရဲတက် သတ္တိ ရ လာပါလ်ိမ့်မယ်.အဲဒီလို စိုရိမ်ကြောင့်ကြ စိတ် မရှိတဲ့ အချိန်မာ...တစ်ရက်ကို ငှက်ပျောသီး 10 လုံးစားပါ...နို့ တစ်ခွက်သောက်.ထမင်း နက် ဟင်း သို့ ငါး သို့ ရောစက်ပြီး. .တစ် ပဂံ ခန့် တစ်နေ့ ကို သုံးခါ စားပါ..၈ နာရီ တစ်ခါ စားပါ. အချိန်တိကျပါစေ..အိပ်ရေး ၀အောင် အိပ်ပါ...အားရင် တရားထိုင်ပါ. 6လ အတွင်း ပျောက် ကင်းပါလ်ိမ့်မယ်....
မှတ်ချက်. တရားထိုင်တဲ့ အခါ မှာ.. စိတ်ကို မပျံ လွင့်ပါစေနဲ့.....ဘေးဘယ. ကင်းဝေးကြပါစေ..